Hodges University dia mora vidy! »Jereo ny saram-pianarana sy ny sarany
Ny tahan'ny saram-pianarana amin'ny oniversite Hodges sy ny sarany
Tongasoa eto amin'ny Hodges University! Ny saram-pianaran'i Hodges dia mitohy ho ambany indrindra amin'ireo andrim-panjakana tsy miankina amin'ny fanjakana Florida. Ny saram-pianarana dia mety ahena amin'ny alàlan'ny vatsim-pianarana, fanampiana ary fihenam-bidy amin'ny saram-pianarana. Ny findramam-bola sy fanampiana ara-bola federaly, ary koa ny fanampiana ara-bola avy amin'ny departemantan'ny fampianarana dia misy ihany koa.
Andao ho lasa tena izy - Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny vidin'ny saram-pianarana miafina ao anaty paoma raha ampitahaina.
Fantatrao ve fa misy fitsipika samihafa momba ny fomba takiana amin'ny oniversite ho an'ny daholobe sy tsy miankina handefasana ny saram-pianarany? Ny oniversite ho an'ny daholobe dia avela handefa ny sarany lafo, izay matetika antsoina hoe "Tuition State", raha toa kosa ny andrim-panjakana tsy miankina amin'ny fanjakana mitady lisitra ny taha-karama isan'ora. Ankoatr'izay, ny oniversite ho an'ny daholobe dia tsy mazava amin'ny sarany sy fiampangana fanampiny mety ho tombana amin'ny mpianatra aorian'ny fisoratana anarana. Ao Hodges, izahay dia te-hahazo antoka fa takatry ny mpianatra mazava tsara ny lanjan'ilay fanabeazana azony.
Mpianatra iray mampitaha ny programa RN na amin'ny Hodges University na amin'ny oniversite. Amin'ny fampitahana an-doha, Hodges dia toa mitentina bebe kokoa amin'ny programa mitovy amin'izany. Ny tsy tsapan'ilay mpianatra dia ny oniversite eo amin'ny fiaraha-monina dia manolotra mari-pahaizana RN roa taona raha i Hodges kosa dia manolotra ny mpiasa tian'ny mpampiasa ary mety ho takiana amin'ny bakalorea amin'ny siansa amin'ny fitsaboana. Ny programa dia ao koa ny saram-pianarana, boky, laboratoara, fanamiana ary stethoscope, raha toa kosa ny oniversite amin'ny fiarahamonina dia mety handoa sarany fanampiny amin'ireo entana ireo. Ho fanampin'izany, na dia mitaky fandaharam-pianarana prerequisite aza ny programa roa tonta, dia atolotra amin'ny hafainganam-pandeha haingana ny programa, ary ampianarina mandritra ny ora maro ahafahan'ny olon-dehibe miasa manatrika.
Mpianatra iray mampitaha ny Oniversite Hodges sy oniversite 4-taona ho an'ny daholobe dia mahita ny tahan'ny dokam-barotra, $ 240 isaky ny ora indram-bola ho an'ny mari-pahaizana bakalorea. Raha ampitahaina amin'ny tahan'ny $ 595 navoakan'i Hodges dia toa fifanarahana mahafinaritra ity, saingy andao handalina lalindalina kokoa. Voalohany, mihatra io taha io raha tsy ao amin'ny fanjakana ianao. Ny salan'isa ho an'ny mpianatra tsy miankina amin'ny fanjakana manatrika oniversite 4-taona ho an'ny daholobe dia manodidina ny 800 $ eo ho eo. Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges, ianao dia mandoa ny tahan'ny ora isan-karazany isaky ny eto amin'izao tontolo izao.
Ny tahan'ny fototr'i Hodges dia $ 595, na izany aza, miaraka amn'ny fotony miampy modely efatra dia hahazo isa 16 ianao amin'ny vidiny 12. Ho fanampin'izay, raha mipetraka any amin'ny fanjakan'ny Florida ianao, dia mety ho mendrika ny fanomezana EASE, izay manodidina ny $ 1420 ho an'ny 2020-2021. Midika izany fa afaka mandoa $ 353.75 / ora ianao. Avy eo, rehefa manampy amin'ny volavolan-dalàna GI ianao, fihenam-bidy ara-tafika sy orinasa, fandaharanasa kofehy mavo, famatsiam-bola ho an'ny karama, vatsim-pianarana, Bright Futures, mari-pankasitrahana Pell Grant, ary vatsim-pianarana anatiny dia mandoa kely fotsiny ny mpianatra sasany.
Tsy lazaina intsony, ao amin'ny oniversite 4-taona ho an'ny daholobe, afaka manatrika kilasy misy mpianatra hatramin'ny 200-350 ampianarin'ny mpianatra nahazo diplaoma ianao mandritra ny roa taona voalohany. Ao Hodges, 12-15 eo ho eo ny kilasantsika ary ampianarin'ireo mpampianatra ao amin'ny mari-pankasitrahana manana traikefa amin'ny tena izy. Rehefa dinihina tokoa, ny fiheverana sy ny fanohanana azonao dia mety ho ny fanapahan-kevitra amin'ny fahombiazanao.
Mpikambana ao amin'ny Florida monina sy mpiambina mavitrika mangataka amin'i Hodges
Taham-pianarana undergraduate = $ 595 isaky ny ora indram-be x 12 FT Credit Time = $ 7140– ny vola fanampiana EASE izay $ 1420 isam-bolana / ($ 2841 isan-taona) = 5720.00
Azonao atao ihany koa ny mahazo 16 mari-bola amin'izany vidiny izany amin'ny alàlan'ny programa Core + 4! $ 5720/16 Credits = $ 357.50 - $ 250 fihenam-bidy miaramila = $ 103.75 isaky ny ora credit.
* Ny tahan'ny saram-pianarana dia mety miova arakaraka ny toe-javatra iainan'ny olona sy ny fandaharam-pianarana ianarany.
Avelao hanampy anay hamatsy vola ny ho avinao ny mpandrindra ny fidirana sy ny fanampiana ara-bola mendrika anay. Ampiharo Androany!
Fampianarana ambaratonga voalohany amin'ny fandaharam-potoana amin'ny ora rehetra: $ 595 isan'ora
Fandaharam-pianarana ho an'ny fandaharam-potoana amin'ny ora rehetra: $ 830 isan'ora
Anglisy ho programa amin'ny fiteny faharoa: $ 295 isaky ny ora indram-bola
Courses amin'ny teny anglisy: $ 335 isaky ny ora credit.
Fandaharam-pianarana cohort miorina:
Fampianarana BSN Core Program: $ 17,200.00 isaky ny fotoam-pivoriana
Fampianarana BSDH Core Program: $ 17,200.00 isaky ny fotoam-pivoriana
Fampianarana EMS Core Program - Track 1: $ 10,166.67 isaky ny fotoam-pivoriana
Fampianarana EMS Core Program - Track 2: $ 9,700.00 isaky ny fotoam-pivoriana
Fampianarana EMS Core Program - Track 3: $ 9,183.33 isaky ny fotoam-pivoriana
Fampianarana EMS Core Program - Track 4: $ 8,433.33 isaky ny fotoam-pivoriana
Fampianarana MAcc Core Program: $ 9,966.67 isaky ny fotoam-pivoriana
Fampianarana ho an'ny PTA Core: $ 10,933.33 isaky ny fotoam-pivoriana
Fampianarana PN Core Program: $ 36,980.00 isaky ny fotoam-pivoriana
CMHC Core Program Tuition (Cohort - Track): $ 9,271.43 isaky ny fotoam-pivoriana
CMHC Core Program Tuition (Non-Cohort) **: $ 830 isan'ora
Famandrihana ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany UPOWER ™ **: $ 3,000.00 isaky ny enim-bolana
Famandrihana diplaoma UPOWER ™ **: $ 3,500.00 isaky ny enim-bolana
Fa maninona no misafidy ny oniversite Hodges?
Kely sokajy kely
Fahaizan'ny diplaoma haingana
Safidy isan-karazany amin'ny fandefasana programa mifanaraka amin'ny fiainanao
Fandaharam-pianarana mifototra amin'ny mpiasa dia nampianarin'ireo profesora mpandresy
Daty fanombohana isam-bolana
Mandraisa kilasy iray isaky ny taranja
Atombohy anio ny # MyHodgesStory!
Ianaro ny momba ny fanampiana ara-bola, vatsim-pianarana, fandaharana amin'ny fihenam-bidy ary fihenam-bidy
Fandoavam-bola ho an'ny mpianatra: $ 250 isaky ny fotoam-pivoriana
Saram-boky / loharanom-bola (rehefa tsy tafiditra): $ 0 - $ 400 isaky ny fampianarana, isaky ny fotoam-pivoriana
* Ho an'ny fandaharam-pianarana sy saram-pianarana feno, ao anatin'izany ny fihenam-bidy, mba jereo ny fandehan-javatra ankehitriny Fepetra sy fepetra fisoratana anarana ho an'ny fampahalalana fanampiny.